Nezvedu | Jiangsu Bornsun Medical Chishandiso Co., Ltd.
Hwehutano Hutano Basa
Jiangsu Bornsun Medical Chishandiso Co., Ltd. ari inotungamira akaigadzira yemhando yezvokurapa zvigadzirwa, yakavambwa muna 2015.
Jiangsu Bornsun Medical Chishandiso Co., Ltd. inogadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvekurapa, yakavambwa muna 2015. Mhuri yedu yechigadzirwa inosanganisira manejimendi manejimendi, kufema, kumutsidzira / kufefetedza, kuendesa okisijeni uye zvigadzirwa zvekuvhiya. Inowanikwa mune yakanaka Wuxi Jiangsu China, Bornsun inosanganisira imba yekuchengetera uye nzvimbo yekuparadzira, nzvimbo yekugadzira, imba yekuchenesa, uye mahofisi ekutungamira evashandi vanopfuura makumi mashanu. Isu tinogadzira nekugadzira zvigadzirwa zvedu, tinogona kunyatso pindura kushanduka kwezvinodiwa zvevatengi vedu, vatengesi, uye musika wehutano. KuBornsun, wese mushandi anoda uye akagadzirira kubatsira panonyanya kudiwa. Nemaonero akanaka, tinoshanda pamwe kuti tibudirire uye nekukurumidza kupindura vatengi vedu, vatinoshanda navo uye nemumwe. Isu tinonzwisisa kuti kubatana ndiko kwakakosha kugona kwedu kugadzirisa zvinodiwa nevatengi vedu uye nezvinodiwa nevezvehutano.
Jiangsu Bornsun Medical Chishandiso Co., Ltd. kuita zvekurapa zvekutsvaga, kugadzira uye kushambadzira. R & D timu rinotungamirwa naMD uye main mainjiniya anonamira kumusika-anotarisisa, sainzi uye tekinoroji segwara, inogara ichigadzira zvigadzirwa zvepamusoro. sangana nezvinodiwa zvakakosha zvekufema, anesthesiology uye vanachiremba vechimbichimbi.
Zvigadzirwa zvekufema: oxygen mask, nebulizer mask, nasal oxygen cannula, suction yekubatanidza chubhu, yekumhanyisa catheter, yakavharwa suction catheter, stool manejimendi system, infusion yekumanikidza bhegi, weti bhegi, yekutsva liner, mudumbu chubhu.
Tine makamuri zviuru zvishanu zvekuchenesa / zvivakwa uye 2000㎡ -kuvaka hofisi nedura. Zvishandiso zvinoshandiswa mukugadzira nekupakata zvakasarudzwa chaizvo kuti zvipe chigadzirwa nehunhu hunodiwa kuti ushande zvinobudirira mukati mechinhanho chemakiriniki ekushandisa. Bornsun anokwanisa kuisa tekinoroji yepamberi yeiyo yekugadzira tambo, kushandisa vakadzidza-uye vakadzidziswa vanhu ekugadzira nehunyanzvi ma Auditor ekudzora kwemhando yepamusoro, uye kumisikidza kugutsikana nharaunda yekugadzira yekugadzira, kurongedza uye sterilizing. Tine nguva yekutsanya yekuendesa mu15-45days.zvakakosha zvinodiwa zvinogona kupihwa. Tine CE uye ISO13485 zvitupa.
Yedu nyanzvi yeinjiniya boka richagara rakagadzirira kukushandira iwe kubvunzana uye mhinduro. Isu tinokwanisa zvakare kukupa iwe nemahara emahara sampuli kuzadzisa zvaunoda. Kuedza kwakanakisa kungangogadzirwa kukupa iwe sevhisi yakanaka uye zvinhu. Kune chero munhu ari kufunga nezvekambani yedu uye zvigadzirwa, ndapota taura nesu nekutitumira maemail kana kutibata nesu nekukurumidza. Senzira yekuziva kutengesa kwedu uye kusimba. zvimwe zvakawanda, unogona kuuya kufekitori yedu kuti uzviwane. Tichagara tichigamuchira vaenzi vanobva kumativi ese epasi kubhizinesi redu rekuvaka hukama hwekambani nesu.